Booliska iyo Nabadsugida oo lagu wareejiyay xerada Maslax: Sawirro - iftineducation.com
iftineducation.com – Ciidamada Booliska iyo kuwa Nabadsugida Dowladda Federaalka Somalia ayaa maanta waxay kala wareegeen ciidamada Milateriga , xeradii milateriga Maslax, Warshadii Nan-naca iyo xarumo kale oo Sedax sano ka hor Al-Shabaab fariisimo u ahaayeen.
Wareejinta xerooyinkaasi ayaa waxaa ka hadlay Taliyaha Ciidanka Xooga dalka General Daahir Aadan Cilmi (Indha-qarshe), Abaan Duulaha Ciidanka Xooga General C/risaaq Khaliif Cilmi, Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida ee Qaranka C/raxmaan Maxamed Tuuryare, Taliyaha Ciidanka Booliska ee Gobolka Banaadir General Maxamed Cumar Yuusuf (Madaale), Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab), Saraakiil ka socotay Amisom iyo xubno kale.
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka ayaa wax wanaagsan ku tilmaamay in Booliska iyo Nabad Suggidu la wareegaan fariisimihii Militariga ee Yaaqshiid iyo Heliwaa, tan iyo markii Ururka Al Shabaab laga saaray Magaalada Muqdisho.
Abaan Duulaha Ciidanka Xooga, ayaa dhankiisa ku waramaaya in tani ay muujineyso horumarka laga gaaray xagga amniga iyo la dagaalanka Ururka Al Shabaab, isla-markaana ay diyaar u yihiin in Nabad Suggida iyo Booliska ku wareejiyaan, goob kastaa oo ammaankeedu ay xaqiijiyeen.
Taliyaha Ciidanka Booliska ee Gobolka Banaadir, ayaa isna waxa uu sheegay inay xaqiijinayaan in si rasni ah, ay ula wareegeen fariisimihii Ciidanka Militariga ku lahaayeen qaybo ka mid ah Waqooyi Bari ee Magaalada Muqdisho.
Ugug danbeyntii Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa u mahad celiyay ciidamada xoogga dalka ee suurageliyay in al-shabaab laga saaro xerooyinkaasi iyo guud ahaan inta badan gobolada dalka, wuxuuna kula dardaarmay ciidamada lagu wareejiyay in ay xoojiyaan amaanka.
Ciidamada xooga dalka iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM oo iskaashanaya ayaa suurageliyay in guud ahaan Muqdisho laga saaro Al-shabaab iyo gobolada dalka qaarkood.